သင်အကြိုက်ဆုံးအရောင်က သင်တွေးတတ်တဲ့ တစ်ခြားအရာတွေကို ပြောပြပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းက သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံးအရောင်က ဘာဖြစ်မလဲ? ဒါ့အပြင် သင်ကိုယ်တိုင်တောင် မသိသေးတဲ့ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကရော ဘာတွေဖြစ်မလဲ?
၁။ အနက်ရောင်/ အမဲရောင်
အနက်ရောင်ကို သဘောကျတဲ့လူတွေဟာ သန်မာအားကောင်းခြင်းရဲ့ ပုံရိပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ လှပခြင်းက သူတို့ကာရိုက်တာရဲ့ တစ်ခြားဘက်ခြမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးကို လက်တွေ့ကျကျမြင်တတ်ကြပြီး အလွန်ရိုးရှင်းသော နည်းလမ်းတွေနဲ့ အောင်မြင်တတ်ကြသူတွေပါ။ တစ်ခြားဘက်ခြမ်းမှာတော့ ဒီလိုလူတွေဟာ ထိရှလွယ်ကြပြီး အနုပညာအပေါ်မှာ တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဖြူရောင်ကြိုက်သူတွေကတော့ တစ်ခြားလူတွေကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်းတဲ့နေရာမှာ ဆရာကြီးတွေပါ။ အမှန်တကယ်စနစ်ကျပြီး လက်တွေ့ကျတတ်တဲ့ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သူတွေဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဒီလိုလူတွေဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရော စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာပါ သန့်ရှင်းလိုကြပြီး တစ်ခြားလူတွေကိုလည်း သူတို့ဘယ်လောက်ဖြူစင်ကြောင်း ပြသတတ်ကြပါတယ်။
အနီရောင်ကို ကြိုက်တတ်သူတွေဟာ အများအားဖြင့် extroverts တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိသူတွေဖြစ်ကြပြီး အနီရောင်ရဲ့ အသုံးဝင်မှုကိုလည်း ကောင်းကောင်းသိကြသူတွေပါ။ အနီရောင်ကို ကြိုက်တတ်သူတွေဟာ တစ်ခြားလူတွေကို ဆွဲဆောင်ရတာကို သဘောကျလေ့ရှိကြပြီး လူတွေသတိထားမိအောင် လုပ်ရတာကိုလည်း ကြိုက်ကြပါတယ်။ ဒီအရောင်က စိတ်အားထက်သန်ပြင်းပြမှုနှင့် တက်ကြွမှုဆိုတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်နေပါတယ်။
လိမ္မော်ရောင်လူတွေကတော့ အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းပြီး extrovert တွေပါပဲ။ သူတို့ကို တစ်ခြားလူတွေက ဝန်းရံနေတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒီအရောင်က ကြောက်ရွံ့မှုကင်းမဲ့ခြင်း၊ သန်မာမှုနှင့် ပျော်ရွှင်မှုတို့ရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရောင်ကို ဝတ်ဆင်ကြတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ ကုမ္ပဏီမှာ တက်ကြွသူတွေဖြစ်ပြီး အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ရယ်စရာပြောတတ်သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အဝါရောင်ကို ကြိုက်သူတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအထွဋ်အထိပ်ရောက်နေကြသူတွေပေါ့။ လှုပ်ရှားနေရတာကို နှစ်သက်တဲ့ အကောင်းမြင်သမားတွေဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ပျော်ရွှင်ရဖို့အတွက် ဘယ်အရာကိုမဆို ရင်းနှီးရဲသူတွေပါ။ သူတို့ရဲ့ အကောင်းမြင်တတ်မှုတွေက ဖြာထွက်ပြီး သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေပါလိမ့်မယ်။
အစိမ်းရောင်ချစ်သူတွေရဲ့ အဓိကပန်းတိုင်က relationship တစ်ခုမှာ လုံခြုံမှုတွေကို ခံစားရစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကို ခံစားချင်တာကလည်း သူတို့လိုအပ်တဲ့ တစ်ခြားနယ်ပယ်တစ်ခုပါ။ တစ်ခြားလူတွေ သူတို့ကို ဘယ်လိုမြင်တယ်ဆိုတာကို အကြီးကြီးစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ အောင်မြင်သော အရေးပါသော လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မြင်လိုကြပါတယ်။
အစိမ်းချစ်သူတွေနဲ့ တော်တော်လေးကွဲပြားခြားနားနေတာကတော့ အပြာရောင်ချစ်သူတွေပါ။ သူတို့ဟာ အရမ်းယုံကြည်မှုရှိပြီး အေးဆေးတည်ငြိမ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ အမြဲတမ်းလိုလိုတစ်ခြားလူတွေအကြောင်း စဉ်းစားပေးကြပါတယ်။ တစ်ခြားလူတွေကို ကူညီဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေပါ။ သင်ဟာ အပြာရောင်ချစ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အလွန်ပညာရှိပြီး တစ်ခြားလူတွေအပေါ် အင်မတန်စာနာတတ်သူမျိုးပါ။
အနုပညာနှင့် hippie look နှစ်ခုစလုံးက ခရမ်းရောင်ကို ချစ်သူတွေကို ဖော်ပြနေတဲ့ စကားလုံးတွေပါ။ သူတို့ဟာ တစ်ခြားူလူတွေဆီကနေ ကွဲထွက်ပြီး တစ်မူထူးခြားလိုသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရယ်စရာတွေပြောတတ်သူတွေဖြစ်သလို သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။